အထိုင်များတာကြောင့် ရှင်သန်မှုလက္ခဏာ နှလုံးလေးကို ထိခိုက်စေနိုင်ပါသတဲ့ - Hello Sayarwon
ပြောင်းလဲလာတဲ့ ခေတ်အခြေအနေကြောင့် လူတော်တော်များများ လှုပ်ရှားမှုနည်းလာကြတယ်။ နေအိမ်မှာလည်း အထိုင်များကြသလို အလုပ်ခွင်မှာလည်း တစ်နေကုန်ထိုင်ပြီး အလုပ်လုပ်နေရသူက ခပ်များများပါ။ အထိုင်များတာက ကျန်းမာရေးကို ထိခိုက်စေမယ်ဆိုတာ ထွေထွေထူးထူးပြောနေဖို့ မလိုအောင်ပါ။ ဒီတစ်ခေါက်တော့ အထိုင်များတာကြောင့် နှလုံးလေး ဘယ်လိုထိခိုက်နိုင်လဲဆိုတာကို ပြောပြပေးပါရစေလား…….
နေ့တိုင်း အချိန်ကြာမြင့်စွာ ထိုင်နေတတ်တဲ့ အမျိုးသမီးတွေဟာ နှလုံးရောဂါခံစားရနိုင်ခြေပိုများတယ်လို့ လေ့လာမှု အသစ်တစ်ရပ်အရ သိရပါတယ်။
တစ်ခုမကသော နှလုံးကို ထိခိုက်စေနိုင်တဲ့ အချက်တွေက
• ကျန်းမာရေးနဲ့ မညီညွတ်တဲ့ စားသောက်မှုပုံစံ
• ရောဂါအခံ တစ်ခုခုရှိတာ
• အထိုင်များတာတွေ ပါ။
လူတိုင်းနီးပါး လုပ်မိနေတဲ့ နှလုံးကို ထိခိုက်စေနိုင်တဲ့ အချက်တစ်ခု
သုတေသီတွေနဲ့ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်သူတွေလုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ လေ့လာမှုတွေအရ အထိုင်များတာက နှလုံး ကျန်းမာရေးကို ထိခိုက်စေနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ အချက်ပါ။ အခုနောက်ပိုင်း လူလတ်ပိုင်းလောက်မှာကတည်းက အများစုဟာ အထိုင်များတဲ့ ဘဝနေထိုင်မှုပုံစံကို ပိုင်ဆိုင်လာကြပါတယ်။
အကြောင်းကတော့ နေအိမ်မှာလည်း အပန်းဖြေတဲ့ သဘောနဲ့ ထိုင်တာ၊ ရုပ်ရှင်ကြည့်တဲ့အခါ ထိုင်ကြည့်တာ။ အလုပ်ခွင်မှာ ထိုင်ပြီး အလုပ်လုပ်ရတာတွေကြောင့် အထိုင်များတဲ့ လူနေမှုပုံစံက အလိုလို လုပ်မိနေရက်သား ဖြစ်နေပါတော့တယ်။
မကြာသေးခင်ကလုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ လ့လာမှုတစ်ရပ်အရ သိရတာက အသက် ၁၈ နှစ် အထက် လူ ၄ ဦးမှာ ၁ ဦးက တစ်နေ့ကို ၈ နာရီနဲ့အထက်ထိုင်ကြတယ် ဆိုတာပါ။ အသက် ၁၈ နှစ်အထက် လူတွေထဲက ၃ ရာခိုင်နှုန်းလောက်ဟာ တစ်နေ့ကို လှုပ်လှုပ်ရှားရှားနေတဲ့အချိန်က ၄ နာရီတောင်မရှိဘူးလို့ သိရပါတယ်။
အခုလုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ လေ့လာမှုအသစ်တစ်ရပ်အရ အထိုင်များတာက အမျိုးသမီးတွေမှာ သွေးဆုံးပြီးတဲ့အချိန်မှာ အဝလွန် တာနဲ့ ရှိသင့်တဲ့ကိုယ်အလေးချိန်ထက်များတာတွေ ခံစားရနိုင်ခြေများပါတယ်။ ဒီပြဿနာကို အများဆုံး ကြုံတွေ့ရတာက အသက် ၅၅ နှစ် နဲ့အထက် အမျိုးသမီးတွေမှာပါ။
လေ့လာမှုအတွင်း အသက် ၅၀ နဲ့အထက် အမျိုးသမီးတွေကို အုပ်စု ၂ စုခွဲပြီး လေ့လာခဲ့ပါတယ်။ လေ့လာမှုအတွင်း အမြဲမပြတ် ကျန်းမာရေးစောင့်ကြည့်စစ်ဆေးမှုတွေ လုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီလေ့လာမှုမှာပါဝင်ခဲ့သူတွေထဲကမှ အထိုင်များတဲ့အမျိုးသမီးတွေဟာ နှလုံးရောဂါ ခံစားရနိုင်ခြေများနေတာကို တွေ့ရှိခဲ့ရပါတယ်။
အမျိုးသမီး ၃ ပုံ ၁ပုံကို အသက်ဆုံးရှုံးစေတဲ့ အကြောင်းအရင်း
အမျိုးသမီးတွေကို အသက်ဆုံးရှုံးမှု အများဆုံးဖြစ်စေတဲ့ အကြောင်းအရင်းက နှလုံးရောဂါပါ။ အမျိုးသမီး ၃ ဦးမှာ ၁ ဦးက နှလုံးရောဂါကြောင့် သေဆုံးနေရသလို အသက် ၅၀ အထက်ရောက်လာတဲ့အခါ နှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာ ရောဂါတွေနဲ့ အမျိုးအစား (၂) ဆီးချိုလိုမျိုး ရောဂါတွေကို ခံစားကြရပါတယ်။
တကယ်ကတော့ အထိုင်များတာက နှလုံးရောဂါဖြစ်နိုင်ခြေကိုတင် များစေနိုင်တာ မဟုတ်ဘဲ။ သေဆုံးနိုင်ခြေကိုပါ များစေနိုင်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် အသက်အရွယ်ကြီးရင့်သူတွေမှာပေါ့။ တစ်နေ့ကို ၁၄ နာရီနဲ့အထက် ထိုင်နေကြသူတွေဟာ အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှ အဝလွန်နိုင်ခြေ များလာကြသလို နှလုံးရောဂါ ခံစားရနိုင်ခြေလည်း တော်တော်လေးများပါတယ်။
အထိုင်များတာက သွေးတွင်းသကြားဓာတ်ကို မြင့်တက်စေနိုင်သလို အမျိုးအစား (၂) ဆီးချိုရောဂါ ခံစားရနိုင်ခြေကိုလည်း မြင့်တက်စေနိုင်ပါတယ်။ နောက်တစ်ချက်က အထိုင်များတာက သွေးတွင်း အဆီဓာတ်ကိုလည်း တိုးစေနိုင်ပါတယ်။ အထိုင်များတာက လေဖြတ်နိုင်ခြေကိုလည်း မြင့်တက်စေနိုင်တာကြောင့် အထိုင်များတဲ့ ဘဝနေထိုင်မှုပုံစံကို ပြောင်းလဲဖို့က မဖြစ်မနေ လိုအပ်မှာပါ။
အထိုင်များတာက အမြန်စား၊ အသင့်စား အစားအစာတွေကို စားသောက်သလောက်နီးပါး ကျန်းမာရေးကို ထိခိုက် စေနိုင်တာပါ။ ဒါကြောင့် ကျန်းမာတဲ့နှလုံးနဲ့ ပျော်ရွှင်တဲ့ ဘဝကို ပိုင်ဆိုင်စေဖို့ဆိုရင် တော်ရုံ သိပ်မဝေးတဲ့နေရာတွေကို လမ်းလျှောက်သွားတာမျိုး၊ အမြဲထိုင်နေတာမျိုးမလုပ်ဘဲ ၃နာရီခြား တစ်ခါလောက် ရုံးတွင်းမှာ လမ်းလျှောက်တာမျိုး မတ်တတ်ရပ်တာမျိုး လုပ်ပေးသင့်ပါတယ်။
နေ့စဉ်ကိုယ်လက် လှုပ်ရှားမှုရှိစေတာက စိတ်ရောကိုယ်ပါကျန်းမာစေပြီး အသက်ရှည်ကျန်းမာစေဖို့ရော နှလုံး ကျန်းမာ စေဖို့ပါ အကောင်းဆုံး အထောက်အပံ့ပေးနိုင်မှာပါ။ လှုပ်ရှားမှု ၁၅ မိနစ်လောက် လုပ်ပေးတာက နှလုံးထိခိုက်နိုင်ခြေကို ၁ ရာခိုင်နှုန်း လျှော့ချပေးနိုင်တာကြောင့် မဖြစ်မနေ အထိုင်များတဲ့ ဘဝနေထိုင်မှုကို ပိုင်ဆိုင်ထားရင်တောင်မှ လှုပ်ရှားမှု ပုံမှန်ရှိနေဖို့ လိုပါမယ်။
ကိုယ့်ရဲ့ ကျန်းမာရေးနဲ့ နှလုံးကျန်းမာရေးကို စောင့်ရှောက်ဖို့ တာဝန်အရှိဆုံးသူက ကိုယ်တိုင်ဖြစ်တာကြောင့် တစ်နေ့တာမှာ အနည်းဆုံး ၁၅ မိနစ်လောက် လှုပ်ရှားမှု ပုံမှန်လုပ်ရင်း နှလုံး ကျန်းမာရေးကို စောင့်ရှောက်ကြဖို့ တိုက်တွန်းလိုက်ရပါ ကြောင်း……….
More evidence that sitting may raise heart disease risk https://www.medicalnewstoday.com/articles/more-evidence-that-sitting-may-raise-heart-disease-risk Accessed Date6March 2020
Heart Disease: Types, Causes, and Symptoms https://www.webmd.com/heart-disease/heart-disease-types-causes-symptoms#1 Accessed Date6March 2020
Causes and Risks of Heart Disease https://www.healthline.com/health/heart-disease/causes-risks Accessed Date6March 2020
ထိုင်နေတာ များလွန်းရင် ဖြစ်လာနိုင်တဲ့ ဆိုးကျိုး များစွာ